बल्ल पाइयो दाजु भाई को बास्त*विक नवलपुरमा!! आखिर हेर्नुस आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो (भिडियो सहित हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News बल्ल पाइयो दाजु भाई को बास्त*विक नवलपुरमा!! आखिर हेर्नुस आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो...
बल्ल पाइयो दाजु भाई को बास्त*विक नवलपुरमा!! आखिर हेर्नुस आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
बल्ल पाइयो दाजु भाई को बास्त*विक नवलपुरमा!! आखिर हेर्नुस आफ्नै श्रीमतीलाई यस्तो: Gaidakot Daju Bhai
ऊर्जा मन्त्रालयले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि भन्दै मन्त्रालयले शाक्यलाई निमित्त प्रमुख तोकेको हो । उनले सोमबार नै पदबाहाली गरेका छन् ।
Previous articleकेटा लाई घरमै ल्यार राख्थी। भाले काटेर पार्टी गर्थी। कसैलाई भने उडाई दिन्छु भन्थी। माया र पैसा धेरै (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
Next articleहे भगवान के हुन थाल्यो । ७ वर्ष मै रबिनाले रमेश प्रसाईलाई राष्ट्रिय सवालमै आच्छु आच्छु पारीन